More Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga na Seville ụgbọ elu na Lufthansa ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » More Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga na Seville ụgbọ elu na Lufthansa ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A ga-eji ọdụ ụgbọ elu Frankfurt Rhein-Main na ihe karịrị ụgbọ elu iri anọ ọzọ si na Munich gaa ebe njem ezumike Europe kacha mkpa.
Lufthansa na -agbakwunye ụgbọ elu 130 ọzọ site na Frankfurt na Munich gaa ebe ezumike Europe a ma ama.
Lufthansa na -ekwupụta mmụba nke ụgbọ elu ụlọ site na Frankfurt ruo Berlin, Hamburg, Munich na site na Munich ruo Berlin, Hamburg na Düsseldorf.
Malite na Ọktoba, a ga -enwe njikọ iri na otu kwa ụbọchị site na Frankfurt ruo Berlin kama njikọ itoolu kwa ụbọchị.
Nnukwu agụụ maka ụgbọ elu na -aga ebe ntụrụndụ na -aga n'ihu n'ime ezumike ụbịa na -abịanụ. Ka ọnwa Ọgọst gachara, Ọktoba na -egosi mmụba kachasị elu na ntinye akwụkwọ maka ebe anwụ na -acha, ebe ndị Europe. N'ihi ya, Lufthansa na -agbasawanye usoro ụgbọ elu ya na ebe anwụ na -ewu ewu.
Lufthansa a na -achọkarị ebe aga na Spain. Ya mere, ụgbọ elu ugbu a na -enye ụgbọ elu ndị ọzọ na Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga na Seville. Portugal, Italy na Gris ka na -ewu ewu. Ya mere Lufthansa na -enye ụgbọ elu ndị ọzọ na Faro na Madeira (ma Portugal), yana Cagliari na Sardinia, Catania na Sicily, na Rhodes (Greece) n'oge oge ezumike ọdịda.
Mgbe ha na -eme atụmatụ, ndị njem ikuku kwesịrị ịdị na -edebe iwu mbata na iche iche dị mkpa na nke dị ugbu a.
Na mgbakwunye, ọchịchọ maka njem ụgbọ elu na -aga n'ihu na -eto nke ọma maka njem azụmahịa. Lufthansa ga -aga n'ihu na -agbasawanye onyinye ụgbọ elu ụlọ ya n'okporo ụzọ dị mkpa maka ndị njem azụmahịa. N'ime izu ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ụgbọ elu agbatịlarị ọrụ ya maka Ọktọba site na pasentị iri anọ na ise n'ụzọ ndị si Frankfurt gaa Berlin, Hamburg, Munich na site na Munich ruo Berlin, Hamburg na Düsseldorf, ma e jiri ya tụnyere July.
Ugbu a, a na -enye njikọ ndị ọzọ na obere ọkwa. Nke a pụtara, n'etiti ihe ndị ọzọ, malite na Ọktọba a ga -enwe njikọ iri na otu kwa ụbọchị site na Frankfurt ruo Berlin kama njikọ itoolu kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, a ga -enwe ụgbọ elu iri kwa ụbọchị site na Frankfurt gaa Hamburg kama njikọ asatọ kwa ụbọchị. Ọnọdụ dị otu a maka Munich: Kama njikọ isii kwa ụbọchị, usoro ụgbọ elu sitere na "MUC" ga -agụnye njikọ iteghete kwa ụbọchị na Düsseldorf malite na Ọktọba.
Ọzọkwa, site n'ịgbasa oge ụgbọ elu, njikọ ndị ọzọ dị ugbu a n'ụbọchị. Ndị njem na -achọkarị ife efe n'ụtụtụ ma ọ bụ na mgbede nwere ike irite uru ugbu a na nhazi ụgbọ elu ka mma.
October 20, 2021 na 13: 22